YC-168 mpamokatra milina fanaovana Proteinina Proteinina tsara indrindra sy orinasa | Yucheng
YC-168 Automatic Protein Ball Machine dia misy ampahany telo:
1. mamorona ampahany
2. ampahany mihodina
3. ampahany manarona.
Ity tsipika ity dia azo ampiasaina amin'ny baolina daty, baolina proteinina, baolina tamarind, baolina fifaliana sns.
YC-168 Automatic Protein Ball Machine dia misy milina extruder sy boribory boribory. Ny masinina dia natao tsy miankina amin'ny ekipan'ireo injenierantsika. Ny masinina dia manana habe kely ary famolavolana manokana ho an'ny orinasa orinasa kely na fivarotana trano.
Mora ny manao baolina sakafo nefa tsy mameno ao anaty. Ny masinina boribory dia afaka manao ny vokatrao ho boribory kokoa noho ny fanaovana tanana. Azonao atao koa ny manampy milina coater vovoka, manisy fitaovana toy ny voanio, voa, vovo, siramamy, sesame, sôkôla, mofo mofomamy eo ambonin'ny vokatrao.
Proteinina fanaovana milina fanaovana famaritana:
fahafahana 60-100 PCS / MIN
Diameter momba ny vokatra 10-50MM
Zintin'aratra 220V / 50HZ
lafiny 2400 * 860 * 1300MM
Yucheng YC-168 Model Protein Energy Ball Making Machine dia noforonina tany am-boalohany mba hanao vokatra baolina daty, aorian'ny fanavaozana taona maro, ny milina fanaovana bala proteinina dia azo ampiasaina ankehitriny mba hanao karazana vokatra baolina maro samihafa, toy ny baolina daty, baolina proteinina, angovo baolina, baolina koba mofomamy, baolina voanio, baolina fahasambarana, baolina sôkôla truffle, baolina tamara, kaikitry ny mofomamy, baolina koba, baolina fanomezana, baolina rum, Brigadeiros, baolina sesame sns. Ny milina proteinina dia iray amin'ireo fitaovantsika maro samihafa.
Ny milina fanaovana angovo baolina dia afaka manao sakafo hafa ihany koa afa-tsy ireo vokatra voalaza etsy ambony, toy ny bar snack, falafel, henan-kena, baolina trondro, baolina fromazy, arrancini, coxinha, cookies, pies, buns, sakafo mangatsiaka sns.
Ny milina baolina angovo dia misy milina telo: extruder baolina proteinina, roller ball proteinina, milina fanosotra voanio.
Ny extruder baolina proteinina no masinina lehibe ahafahana mamoaka sy manapaka ny koba na mifangaro, Misy hopper roa amin'ny lafiny roa izy: lafiny ankavia ho an'ny casing ara-dalàna, lafiny ankavanan'ny famenoana afovoany. Ny hopper tsirairay dia manana visy boribory roa namboarina hamoaka ny fitaovana amin'ny mpanitsy, avy eo midina amin'ny fantsom-panafody sy ny nozatra, notapahin'ilay vavahady boribory. Ny extruder baolina proteinina dia afaka mamorona sy manapaka ny koba tsirairay amin'ny habe sy lanjany mitovy amin'ny lanja erro + -1gram.
Ankoatr'izay, ny masinina mpanamboatra bala proteinina dia mandika ny fiasan'ny tanana ary mampiasa ny rafitra fanaraha-maso PLC amin'ny takelaka fakan-tsary, masinina mandeha ho azy tanteraka izy io.
Ny milina fanodinam-baolina proteinina dia ny milina faharoa izay mifandray aorian'ny milina fantsom-panafody proteinina, ny milina fanodinana baolina protien dia mandray rafitra vy tsy misy fangarony sy kodiarana mihodina aluminium hanakodia ny baolina tsirairay miaraka amin'ny hafainganam-pandeha azo ovaina sy ny fitsaboana manohitra. Ny refin'ny savaivony dia 10mm ka hatramin'ny 50mm.
Ny milina fanosotra voanio koa dia mandrindra ny firafitry ny vy tsy misy fangarony sy ny amponga mihodina amin'ny aliminioma, afaka mitafy ny voanio voanio, mamono voanjo, vovoka, voa, sns.
Ankoatr'izay, ny extruder baolina proteinina dia afaka miara-miasa amin'ny milina fanapahana tsipika daty hanaovana cookies daty sy bara misy voankazo, ary mandrindra miaraka amin'ny milina fanaovana hajia maamoul hanaovana maamouls sy mooncakes.
Milina fanaovana proteinina Ball:
1. Stainless vy 304, mifanaraka amin'ny fenitry ny fahadiovana ara-tsakafo.
2. Product diameter10-50mm, tahan'ny sy ny hafainganam-pandeha azo ovaina.maximum capacité 100pcs / min.
3. Fandidiana mandeha ho azy, rafitra mirindra, madio madio.
Maninona ny milina fanaovana bainao angovo azonao atao dia mahavita vokatra baolina maro samihafa?
Ny milina fanamboarana baolina proteinina dia milina maodely multifunctional izay misy milina fantsom-panafody, mihodina ary mifono. Ny hoppera milina proteinina dia mampiasa visy boribory lehibe roa hamelana ireo fitaovana hampiasa herinaratra mahery, ary koa ny hopper sy ny visy dia voaravaka teflon hitazonana fitaovana miraikitra. Ny milina fanodinana baolina proteinina sy ny milina fanosotra voanio dia nampiasa firafitra vita amin'ny aliminioma, mifono teflon ihany koa izy ireo. Izany no mahatonga ny milina fanaovana proteinina ho an'ny proteinina mahavita karazana vokatra marobe na dia samy hafa fitaovana na raikipohy aza.
Inona avy ireo vokatra baolina hafa azon'ny milina fanodinana baolina proteinina?
Ny milina fanodinana baolina proteinina dia afaka manamboatra vokatra baolina hafa toy ny ball rum, Brigadeiros, truffle sôkôla, baolina oatmeal, manaikitra mofomamy, baolina voanio, baolina voa sesame, baolina mazipan, baolina fanomezana, Bunuelos, baolina fromazy, baolina ovy, sns. Ka ny milina fanaovana bala proteinina koa dia milina fanaovana baolina rum, milina fanaovana brigadeiros, milina fanaovana truffles sôkôla, milina fanaovana baolina sesame, sns.
Azonao atao ve ny manao milina fanaovana proteinina?
Ny masinina proteinina ataontsika dia afaka manamboatra sakafo hafa koa. Afa-tsy ny milina fanodinana baolina proteinina sy ny milina fanosotra voanio, ny masinina lehibe dia ny extruder baolina proteinina, izay ilay maodely YC-168 maodely mandeha ho azy Encrusting Machine antsika. Ny milina proteinina extuder dia natao hanamboarana sakafo tsy hamenoana toy ny cookies, maamoul, horonan-daty, pie, sakafo mangatsiaka sns. Raha mila tsipiriany misimisy kokoa, azafady zahao ny masininay YC-168 mandeha ho azy Encrusting.
Inona ny habe azon'ny milina fanaovana angovo proteinina atao?
Raha ny mahazatra, ny milina proteinina manome hery ny savaivony dia manomboka amin'ny 10mm ka hatramin'ny 50mm, azontsika atao ny manamboatra habe lehibe kokoa raha toa ka takian'ny mpanjifa, ohatra, ny baolina savaivony 65mm ho an'ny mpanjifanay Kanadiana mba hanao baolina angovo.
Inona ny lanja maivana indrindra ataon'ny masininao baolina?
Mazava ho azy fa ny milina baolina angovo ataontsika dia afaka manisy lanjan'ny sakafo 10g ka hatramin'ny 250g, ny lanjany maivana indrindra nataontsika dia 6g.
Ohatrinona sy kodiarana mihodina no omenao ny milina fanaovana angovo?
Ny masinina iray dia manana bobongolo sy kodiarana mihodina. Raha mila mpanjifa fanampiny ny mpanjifa dia mila manefa ny vidiny izahay.
Ahoana raha manana habe baolina mihoatra ny iray aho, afaka mahavita azy ve ny milina fanodinanao baolina?
Ny milina fanodinam-bola ataontsika dia misy kodiarana mihodina. Raha manana habe baolina mihoatra ny iray ny mpanjifa ary mihoatra ny 2mm ny refin'ny savaivony dia manome sosokevitra ny mpanjifa izahay mba handray kodiarana mihodinkodina fanampiny. Ny ankabeazan'ny mpanjifanay dia manana haben'ny baolina iray ihany, ny sasany amin'izy ireo dia manana habe roa.
Ho an'ny roller baolina angovo, inona ny fitaovana amin'ny kodiarana mihodina? Manana kodiarana mihodinkodina mora vidy kokoa ve ianao raha habe amin'ny baolina maro?
Ny kodiarana mihodina ho an'ny milina fanodinam-bolantsika dia fitaovana aliminioma mifono teflon. Somary lafo ihany, saingy ity fitaovana ity dia miorina tsara sy matanjaka kokoa amin'ny fihodinana ary tontolo iainana bebe kokoa amin'ny famokarana sakafo. Misy kodiarana mihodina mora vidy vita amin'ny plastika, izay tsy anaovan'ny orinasa anay.
Azonao atao ve ny manome ny milina fanaovana soa ho an'ny fividianana sôkôla na granula?
Ny milina fanaovana bliss ball dia afaka mitazona chips sôkôla na granula manana habe ao anaty 4mm, ary ho an'ny chips sôkôla lehibe kokoa, dia ho mora vaky sy hiempo izy mandritra ny fitrandrahana. Ary koa ny granules lehibe kokoa dia sarotra esorina. Ireo chip sy sôkôla sôkôla dia tsy misy fitiavana amin'ny milom-piravoravoantsika. Ny milina fipetrahanay australia dia amidy tsara satria tsara kalitao.
Inona avy ireo fitaovana azonao ampiasaina amin'ny palitao milina voanio?
Ny milina voanio voanio dia afaka mametaka ny voanio, voan ny sesame, voa voankazo, voanjo nopotehina, chips sôkôla, vovo-tany, sns.
Azonao atao ve ny manaikitra ny angovo ataonao rehefa manao milina famenoana na baolina fenoina? Raha eny, inona no karazana fitaovana azo ampiasaina hamenoana?
Ny masinina ataontsika manaikitra dia afaka manao baolina famenoana afovoany, ny famenoana fitaovana dia mety ho jam, dibera voanjo, paty sôkôla, paty voankazo, ranoka sôkôla, sns.
Inona ny casing ivelany sy ny famenoana ration ho an'ny masinin-dry zareo manaikitra extruder?
Ny karatra ivelany sy ny famenoana afovoany dia 1: 9-10: 0.
Afaka mamorona bara ve ny kaikitry ny proteinina ataonao? Mila manampy milina fanampiny ve isika?
Ny milina fanaovana proteinina manaikitra dia afaka mamokatra vokatra bara amin'ny alàlan'ny fanampiana milina fanapahana fanampiny izay nosarahan'ny rafitra PLC miaraka amin'ny efijery.
Ahoana raha miraikitra ny lalàko na mafy loatra? Ahoana no hitsarana?
Ny milina fanaovana proteinina dia tsy mety afa-tsy amin'ny fifangaroana malefaka sy salantsalany, ny fifangaroana mifikitra loatra dia hifikitra amin'ny fehikibo sy fehikibo. Ahoana ary ny fomba hampihenana ny hamafin'ny hafanana sy ny viscosity?
Manana traikefa mihoatra ny folo taona amin'ny milina proteinina izahay, efa nandinika fitaovan'ny mpanjifa an'arivony. Voalohany, afaka mitsara amin'ny ankapobeny isika amin'ny fahitana sary baolina; Faharoa, afaka mitsara isika amin'ny fijerena ireo horonantsary mifangaro an'ny mpanjifa. Tokony ho fangaro vaovao vita vaovao izy io, mazàna isika dia mitaky ny fametahan'ny tanana ny fangaro mba hahafahantsika mitsara ny hamaf sy ny viscosity amin'ny fotoana iray. Raha koba mafy dia sarotra ny manery amin'ny tanana, raha mifangaro mifikitra izy io dia tsy ho latsaka avy eny an-tananao na tsy ho latsaka amin'ny fehikibo. Fahatelo, takianay ny mpanjifa handefa anay ny lisitry ny laharam-pahamehanan'izy ireo, ny tiana amina antsipirihany no tianay. Ary farany, raha mbola tsy afaka mitsara isika, dia hitaky ny fandefasan'ny mpanjifa anay ny fitaovany amin'ny alàlan'ny rivotra, hizaha toetra azy eto amin'ny orinasa izahay.
Azonao atao ve ny mampifandray ilay milina fantsom-panafody proteinina, milina fanodinana baolina proteinina, milina fanosotra voanio ho lasa tsipika mandeha ho azy feno?
Eny, ny masinina telo dia azo ampifandraisina tsirairay, misaraka ny masinina tsirairay, mety mihetsika sy mifehy.
Masinina hafa inona no ilaina amin'ny famokarana baolina?
Ny milina baolina angovo dia tsy mila herinaratra fotsiny, tsy mila milina hafa sy loharano angovo.
Azontsika atao ve ny mividy ilay roller ball fotsiny?
Ny mpanjifa dia afaka mividy ny milina fanodinam-bola amin'ny angovo fotsiny, Fa raha tsy misy ny extruder ny koba, ny mpanjifa dia mila manamboatra koba tsirairay avy amin'ny tanana, avy eo maka tanana tsirairay. Ity fomba ity dia handany ny asa sy fotoana betsaka ho an'ny mpanjifa. Ankoatr'izay, ny fanapahana ny koba tsirairay dia afaka 't manome antoka ny lanjan'ny koba, ny mpanjifa dia mila mandanja tsirairay ny koba tsirairay, tsy vahaolana mahomby izy io. Raha atao teny iray, dia manoro hevitra ny mpanjifa izahay mba hiaraka handray ny milina fantsom-panafody bar.
Fitaovana ilaina ve ilay milina fanosotra voanio? Azontsika ampiana ihany ve izany amin'ny manaraka?
Ny milina fanosotra voanio dia tsy fitaovana ilaina. Afaka ampidirin'ny mpanjifa izany amin'ny ho avy. Ny masinina proteinina extrusion ball ary ny milina fanodinana baolina proteinina no fitaovana ilaina. Raha toa ka takiana amin'ny mpanjifa ny fametahana azy dia azony atao amin'ny alàlan'ny fandidiana tanana izany.
Manana milina famonoana lehibe kokoa ve ianao?
Manana milina famonoana karazana latabatra tokoa isika, fahaiza-manao lehibe kokoa azo ampiasaina amin'ny milina fanaovana angovo baolina maro.
Manana masinina fonosana proteinina ve ianao?
Manana milina fonosana proteinina karazana mikoriana izahay ary milina fonosana proteinina karazan-tsipika mitsangana ho fidin'ny mpanjifa, azafady mifandraisa aminay raha mila tsipiriany misimisy kokoa.
Azontsika atao ve ny mitsapa ny milina baolina angovo alohan'ny fividianana? Ahoana no hizahantsika toetra?
Tongasoa hatrany ireo mpanjifa mba hitsapa ny masininay proteinina. Raha ny mahazatra dia misy fomba roa hanandraman'ny mpanjifa ny milina fanaovana proteinina: 1. Mitsidika anay manokana ny mpanjifa na manankina antoko fahatelo hitsidika anay hitsapana. 2. Ny mpanjifa dia mandefa anay ny akora sy ny paikadiny, manandrana ny mpanjifa izahay.
Ny mpanjifa dia afaka misafidy ny fomba mety indrindra tadiavin'izy ireo. Ho an'ny mpanjifa sasany izay tsy mety mandefa anay ireo fitaovana dia afaka manampy amin'ny fividianana ireo fitaovana eo an-toerana izahay.
Ahoana raha tsy afaka manao ny baoliko ny milina fanaovana rumina aorian'ny fitsapana? Afaka mamerina ve isika?
Raha tsy afaka manao ny fitaovan'ny mpanjifany ny milina fanaovana rumantsika aorian'ny fitsapana dia manaiky izahay fa haverina tanteraka.
Azonao atao ve ny manamboatra ny herinaratra milina baolina kitra, ohatra ny 380V?
Ny valin'ny milina proteinina dia azo namboarina ho an'ny 380V na 110V. Afaka manampy mpanova ho an'ny mpanjifa izahay. Ny milina fanaovana proteinina dia azo namboarina ihany koa ho an'ny 220V, dingana telo. Ny masinina fanaovan'ny milina proteinina dia 220V, dingana tokana.
Manana piesy ve ianao amin'io milina manaikitra amin'ny angovo io, isaky ny manova inona?
Ny andiana piesy iray dia halefa miaraka amin'ny milina manaikitra angovo. Ireo faritra hafa dia misy ny boaty fikojakojana, peratra famehezana, vazivazy fanampiny, sns.
Ny milina manaikitra manaikitra manana faharetana tsara amin'ny kalitao, tsy ilaina ny manova ny kojakoja raha mbola tsy tapaka izy ireo.
Raha toa ny mpanjifa mila kojakoja fanampiny ho an'ny manaikitra manaikitra amin'ny ho avy, dia afaka mandefa mpanjifa mivantana amin'ny rivotra isika ao anatin'ny 3 andro.
Inona no fiantohana azonao amin'ny milina fanamboarana sôkôla? Ahoana raha vaky ilay milina sôkôla?
Ho an'ny milina fanamboarana sôkôla, ny fiantohana anay dia 12 volana, serivisy mandritra ny fiainana.
Ho tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana milina tsy misy sarany izahay mandritra ny vanim-potoana fiantohana raha toa ny olana eo amin'ny masinina vokariny eo aminay. Aorian'ny vanim-potoana fiantohana dia mbola mitazona ny serivisinay izahay, ny vidin'ny vidin'ny mpanjifa ihany no ampandoavinay ny ampahany simba, ary alefanay amin'ny rivotra haingana araka izay tratra ny mpanjifa.
Mila fametrahana sy fanofanana ve ity milina sôkôla ity?
Ny injeniera misy anay dia azo apetraka foana raha toa ka mitaky ny mpanjifa; Satria kely ny haben'ny milina sôkôla, feno ny entana ary alefa amin'ny mpanjifa, noho izany tsy ilaina ny fametrahana; koa ny milina fanaovana sôkôla dia fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny PLC miaraka amin'ny efijery mikasika, izay manamora ny fandefasana tarehimarika amin'ny efijery, Manana torolàlana antsipirihany sy horonantsary fandidiana ho an'ny fampiofanana ny mpanjifa izahay; farany, manana ekipa mpanampy amin'ny serivisy an-tserasera izahay.
Raha toa ny mpanjifa ka mitaky ny fametrahana sy ny serivisy fanokafana anay, dia handamina visa sy injenieran'ny fandaharam-potoana izahay.
Manana mari-pankasitrahana ve ianao amin'ny milina mpanamboatra baolina?
Ho an'ny milina mpanao angovo baolina, manana fanamarinana CE izahay.
Firenena iza no nivarotanao ity milina mpamorona baolina angovo ity?
Ny milina fanaovana proteinina dia manao baolina daty, baolina angovo ary bala proteinina. Ny tsenanay lehibe indrindra dia USA, UK, Australia, India, Middle East. Ny milina proteinina australia dia amidy tsara amin'ny fanaovana baolina proteinina sy baolina fifaliana. Ny milina fanodinana baolina proteinina australia dia afaka mamokatra vokatra proteinina sy ny proteinina. Ny milina fanaovana trokoloka sôkôla dia amidy any Eropa ary The South America, indrindra any UK sy Chile. Ny milina fanaovana baolina daty dia amidy tsara any Moyen orient, indrindra any Dubai.
Inona ny ora fanateranao ny milina fanaovana sôkôla?
Manana ny tahiry milina fanaovana sôkôla isika, afaka mandefa ao anaty herinandro ho an'ny mpanjifa.
Inona no fonosana ho an'ny mpanamboatra sôkôla?
Ny mpanamboatra sôkôla dia mampiasa boaty hazo fanondranana matanjaka, tsy misy fumigation.
Inona ny fitaterana an'ity fitaovana sôkôla truffle ity?
Manana fandefasana sy fiaramanidina ho an'ny mpanjifa mifantina amin'ny fitaterana izahay. Ny fitaovan'ny truffle sôkôla dia tsy lehibe habe, raha maika ny mpanjifa, dia afaka mandinika ny fitaterana amin'ny rivotra izy. Afaka mandamina eto izahay raha tsy manana agents ny mpanjifa.
Inona ny fe-potoana fandoavanao ny milina fanaovana angovo?
Ny fe-potoam-pandoavam-bolanay dia 30% fametrahana toy ny fandoavam-bola, fialan-tsasatra 70% alohan'ny fandefasana.
Ahoana ny fomba hanafarana ny milina fanaovana angovo baolina?
Aorian'ny fanamafisan'ny mpanjifa ny baiko, dia hisarika faktiora ara-dalàna ho an'ny mpanjifa fakany faktiora proforma miaraka amin'ny mombamomba ny masinina proteinina, ny varotra ary ny mombamomba ny bankinay izahay. Ny mpanjifa dia afaka misafidy ny famindrana banky, ny carte de crédit na fomba hafa handaminana ny fandoavana 30%.
Aorian'ny fahazoana ny karaman'ny mpanjifa dia hampahafantatra ny mpanjifa izahay ary hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny baiko hanamboarana ny milina proteinina.
Amin'izany rehetra izany, inona no vidin'ny milina fanaovana angovo proteinina?
Amin'ny maha mpanamboatra ambony sy manam-pahaizana momba ny milina proteinina angovo proteinina antsika, ny vidin'ny milina fanaovana bala proteinina dia ho mifaninana sy mandanjalanja indrindra. Raha te hahalala ny vidin'ny milina fanaovana baolina angovo dia mifandraisa aminay avy hatrany ho an'ireo fisondrotana farany sy vidiny farany!
Teo aloha: YC-170 Wire Cutter Panda Cookies Machine Production Line
Manaraka: YC-170-1 Cookies Ultraonic Cookies Cutter gilasy Masinina Cookies
YC-168 Cheese mandeha ho azy nofenoina Croquette Encrus ...
Tamales avo lenta manao fananganana encrusting ...
YC-168 mandeha ho azy Brezila Coxinha Encrust ...